Xcode 8: API nke na - eme ka ihe di mfe ma jikọta ya na ngwa ngwa | Esi m mac
Akụkọ Apple na-egosi na nke a akari WWDC 2016 Ha na-eju ndị ọrụ niile na ndị mmepe anya na-atụ anya mmelite ahụ ka ha nwee ike ịmalite nyocha na gburugburu ebe ndị a.
Dị ka a tụrụ anya, mgbe ngosi nke ọhụrụ ahụ iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3 na tvOS 10, Apple gosiputara a ọhụrụ API nwere ohere ndị ọzọ na ngwa ọrụ ka mma: Xcode 8 dị ugbu a maka nbudata na ukara website maka mmepe nke Apple.
Newdị ngwa ọhụrụ a, Xcode 8, nke ga - enyere gị aka ịmepụta Koodu dakọtara na nyiwe Apple niile, kwere nkwa nnukwu mmụba na usoro nke ọsọ ọsọ ma na-agụnye ndọtị a kapịrị ọnụ nke ga-ekwe hazie nke kacha ahụmịhe nzuzo, Ihe ngosi oge ezumike ịchọpụta mmejọ na a ihe nlele ohuru.
Apple egewo ntị na arịrịọ sitere n'aka ndị mmepe na-arịọ a gburugburu ebe obibi dị mfe encode na ọtụtụ ngwaọrụ. Site na Xcode 8 ọ ga - ekwe omume ịhazi ọtụtụ ngwaọrụ nwalee nsụgharị nke ngwa mepụtara na a mfe asambodo. Dị ka ihe ọhụrụ kachasị dị egwu, ndị mmepe ga-enwe ike ịnụ ụtọ njikọta zuru oke nke asụsụ Swift.
Otutu imeghari uzo na Xcode 8
Ngwa API adịla emezigharị iji nweta arụmọrụ ka ukwuu, ọsọ na chịkwaa nhọrọ. Na Xcode 8 ọ ga-ekwe omume ịme a pụrụ ịdabere na preview ma kwụsie ike nke ngwa dị ka ọ ga-anọchi anya na Apple ngwaọrụ, na-eme mgbanwe n'etiti ngwaọrụ na- melite nhazi nke interface obula na-egosi nsonaazụ ikpeazụ.
na ndọtị ọhụrụ esịne ke Xcode 8 maka isi iyi koodu editọ-enye gị ohere iji hazie nzuzo ma kenye mkpirisi keyboard maka ọrụ nkịtị. Ọzọkwa, Xcode 8 gụnyere ndebiri ọhụrụ na-enye ohere mmepe mezie ndọtị ma kesaa ha na Mac App Store ma obu banye ngwa gị n'enweghị nsogbu na gị Onye Mmepụta ID.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple weputara Xcode8 maka sistemu ohuru ohuru ya ma mee ka oru nke ndi mmepe di nfe
Isi awa abụọ nke Apple belata na 7 nkeji na vidiyo a